Mepụta Marketingtù Azụmaahịa Kachasị Mma. | Martech Zone
Na mkparịta ụka mụ na enyi m na onye ọrụ ibe m Joe Chernov, VP Marketing na Kinvey anyị na-agbanwe ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị kachasị ajụ anyị abụọ natara n'ime ìgwè anyị na site n'aka ndị ọgbọ na ụlọ ọrụ ahụ. Na Joe ịbụ onye ọdịnaya ahịa nke afọ ọ gaghị eju gị anya ịmara na otu n'ime ajụjụ ya kachasị ajụ bụ:
Kedụ ka m ga-esi bido mmemme azụmaahịa nke ọma?
Ajụjụ nke abụọ ọ na-ajụkarị bụ:
Kedu ka ị si ahazi ndị ahịa gị?
Na-awụ akpata oyi n'ahụ? Eleghị anya ọ bụghị.
Ka m na-ajụ ndị ọrụ ibe m, ọ bịara doo anya na ahụmịhe nke Joe abụghị nsogbu. N'ezie, ahụmịhe nke onwe m yitụrụ nke ya ma ka m bidoro imekwu nyocha ọ doro anya na ezigbo nhazi nhazi n'ihi na gị ahịa otu bụ ọkụ isiokwu. Mbido chọrọ iwulite otu ọganiihu na nnukwu ụlọ ọrụ chọrọ ịkwalite nke ha. Ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ bụ na enweghị nnukwu ọdịnaya nke ọdịnaya bara uru na-akwado isiokwu a.
Kemgbe ọtụtụ afọ gara aga, enwere m ihu ọma idu ndị isi ahịa maka azụmaahịa na azụmaahịa azụmaahịa. Adị m akụkụ nke iwulite ụlọ ọrụ site na ncha na mmalite Tinye aka (ugbu a, a akụkụ nke Iha) na optimizing na ìgwè na Webtrends na ugbu a Mindjet. N’oge a, etolitela m akwụkwọ ọgụgụ ahaziri iche nke nwere ike ịgbasa n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị azụmahịa ọ bụla, na-eme mgbanwe dị ukwuu, nwekwaa ndekọ ndekọ egosiri maka ọganiihu. N'okpuru ebe a bụ akwụkwọ egwu m ma enwere m olile anya na ọ ga-amalite mkparịta ụka ma ọ bụ na-akpali echiche maka otu nke gị.
Otu ihe doro. Ọnụego nke ọgba aghara na mgbanwe ga-abawanye na ahịa. Echere m na nzukọ ahịa gị kwesịrị ịkwado ikike ịmegharị mgbanwe ndị ahụ ma nwee ọganiihu. M ga-enwe mmasị na nzaghachi gị na otu anyị nwere ike isi mee ka egwu egwu a ka mma.
Tags: ngalaba ahianzukọ ahiausoro ire ahiaOrganizationUsoro nhazi